Real Madrid Oo Isha Ku Heysa Ciyaaryahanka Kooxda Manchester City Raheem Sterling.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaReal Madrid oo isha ku heysa ciyaaryahanka kooxda Manchester City Raheem Sterling.
May 5, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay il gaarah ku heyso xaalada Raheem Sterling ee jahwareerka ku heysa kooxda Manchester City .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa lumiyay booskiisa safka koowaad ee Pep Guardiola ee Phil Foden toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaana kaliya uu ku riyaaqay sideed daqiiqo oo uu ka ciyaaray kulankii Paris Saint-Germain .
Iyadoo City la sheegayo inay isha ku heyso inay u dhaqaaqdo Erling Braut Haaland iyo Jack Grealish , kooxda ayaa lagu soo waramayaa inay u furan tahay inay iibiso Sterling haddii dalab ku habboon uu yimaado.
Sida laga soo xigtay Football Insider , Real Madrid ayaa isha ku heysa horumarka ku xeeran mustaqbalka Sterling, City-na waxa ay dul dhigtay madaxa weeraryahanka 75m.
Warbixinta ayaa intaas ku dareysa in City ay markaa fiirin doonto inay lacagahaas u adeegsato inay ku caawiso helitaan kabtanka Grealish, iyadoo wadahadalo ku saabsan heshiiska Sterling ee Etihad – uu dhacayo 2023.
Sterling wuxuu dhaliyay 13 gool iyo 11 caawin dhamaan tartamada xilli ciyaareedkan, laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu safka koowaad kusoo bilaabo mid kamid ah shantii kulan ee ugu dambeysay City ee Champions League.